Huesca मा कहाँ खान? क्षेत्रहरू, ठाउँहरू र विशिष्ट भाँडा | यात्रा समाचार
Huesca मा कहाँ खाने
लुइस मार्टिनो | | स्पेन शहरहरू, Gastronomy
ह्युस्का सिटी काउन्सिल
ह्युस्कामा कहाँ खान सकिन्छ भन्ने कुरा अर्गोनी शहरका आगन्तुकहरूको बीचमा सामान्य प्रश्न हो। यसको कारण यसको ग्यास्ट्रोनोमी बास्क देश वा त्यो जस्तो लोकप्रिय छैन Galicia। यद्यपि, विशेष रूपमा ह्युस्का खाना र सामान्य रूपमा अर्गोनी हुन् उत्कृष्ट गुणभूमिको उत्पादनहरूमा आधारित र सावधान र धेरै स्वादिष्ट ब्यबहारको साथ।
यदि तपाई ह्वेस्कामा कहाँ खानुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई देखाउन जाँदैछौं सबै भन्दा राम्रो पेट्रो क्षेत्र शहर बाट। तर सबै भन्दा माथि, हामी तपाईंलाई उनीहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं सामान्य व्यञ्जन त्यसोभए, एक पटक तपाईंले एक रेस्टुरेन्ट छान्नु भएपछि, तपाईंलाई के अर्डर गर्ने भन्ने पनि थाहा हुन्छ।
1 ह्युस्का ग्यास्ट्रोनोमी
2 ह्युस्कामा केही ग्यास्ट्रोनोमिक घटनाहरू
3 Huesca मा कहाँ खाने
3.1 लिलास पस्टिया
3.2 लस टोरेस
3.3 फ्लोर, ह्युस्कामा खानको लागि बारहरूमा क्लासिक
3.4 टाटाउ बिस्ट्रो
3.6 एल ओरिजेन
3.7 ला गोयोसा
3.8 फिक्शन कुक
समुद्री तटविहीन प्रान्तको रूपमा, ह्युस्काको खाना पनी आधारित छ मासु y तरकारी। यसले माछा पनि समावेश गर्दछ तर, तार्किक रूपमा, यो सामान्यतया नदीबाट हुन्छ (कड बाहेक)। जमिनको उत्पादनहरु मध्ये, पीक मिर्च, लास ट्रफल्स आन्सा उपत्यकाबाट सिमी एम्बेन, को अन्त वा भेडा, जो जवान भेडा हो।
यी सबैको साथ, व्यंजनहरू जस्तै हिमाल शतावरी, जसको यो तरकारीसँग केहि गर्न दिईंदैन, तर वास्तवमा यससँग बनाइएको छ पोखरी पाठोको पुच्छर। तर भेडाको पाठको विस्तार छ थुक्नु, त्यो हो आगोमा भुलिन्छ।
मासु मध्ये, हामी पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ गाईको जीभ ह्युस्का, लास अर्गोराइन पोर्क चप्स र एम्बोन बोलिकहरू, जो सिमी र सुँगुरको कान लगाउँछन्। खेलका बारे, तिनीहरू उत्कृष्ट व्यंजन हुन् पियक्कड, the पियक्कड खरायो, the सलोमर्जोका साथ कबूतरहरू र कोठा भित्रको कणहरू। तपाईंले केहि सॉसेजहरू पनि कोशिस गर्नुपर्दछ सॉसेज डे ग्रास र arbiello को क्षेत्र बाट पोनी.
माछाको लागि, ह्युस्काको खानाले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ कोड, जो अल ajoarriero, baturra वा fritters तैयार छ। र पनि ट्राउट, जो तपाईं केहि पछि दोस्रो कोर्सको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ खैरो सूप o rusts। यद्यपि, यदि तपाईं केहि बढि सशक्त कुरा रुचाउनुहुन्छ भने, तपाईंसँग छ गोठालोको टुक्रा, लास farinetas वा कल Binéfar recao, जसमा सिमी, आलु र चामल छ।
अन्तमा, डेसर्टको रूपमा, तपाईंले प्रयास गर्नुपर्दछ भुटेको दूध, ला anise केक, the नन लामो सास वा रोटी। सामान्य पनि छन् बोरेज क्रेप्स, the रिफोलौ वा coc, एक क्विन केक र आटा। र, तपाइँको खाना धुनको लागि, तपाइँसँग उत्पत्तिको पदनामको उत्कृष्ट वाइन छ सोमन्टानोजुन मुख्य रूपमा बार्बास्ट्रो क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ।
ह्युस्कामा केही ग्यास्ट्रोनोमिक घटनाहरू
अर्कोतर्फ, ह्युस्कामा कहाँ खानुपर्दछ र के अर्डर गर्ने भन्ने ज्ञानको अतिरिक्त, तपाईं अर्गोना province्ग प्रान्तमा भएको ग्यास्ट्रोनोमिक घटनाहरूका बारेमा पनि सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसैले, Escalona मा Chireta महोत्सव, एउटा ससेज जुन भेडाको ट्रिपलाई यसको इंट्राइलहरू र चामलका साथ बनाएर बनाइएको हो।
त्यस्तै, बार्बास्ट्रोमा एक छ crespillo पार्टी, संयुक्त राष्ट्र सोमन्तोनो चाड र केहि Mycological दिनहरु। यसको अंशको लागि, पूंजी सामान्यतया एक हो हिमाल खानाको गैस्ट्रोनोमिक दिनहरू र भेडासँग सम्बन्धित अन्य घटनाहरू, अर्गौंनास ग्यास्ट्रोनमीको रत्नहरू मध्ये एक। यो पनि परम्परागत छ, समयमा माइनर फेस्टिवलहरू वा स्यान भिसेन्टे (जनवरी २२), भुटेको आलु, सॉसेज र चुरेसको स्वाद लिदै।
एकपटक हामीले तपाईंलाई ह्युस्काको पेट्रोनोमी र यसका केही पाक घटनाहरूको बारेमा बताइसके पछि हामी ह्युस्का कहाँ खाने भन्ने कुराको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं, त्यो हो शहरको ग्यास्ट्रोनमिक क्षेत्रहरू र यसका केही प्रमुख रेस्टुरेन्टहरू के हुन्।
तपाईंले ह्युस्का शहरमा बार र तपसको क्षेत्र पाउनुहुनेछ सान लोरेन्जो छिमेक, the उच्च कोसो र मार्टिनेज डे भेलास्को एवेन्यू। यो के भनेर चिनिन्छ छ ट्यूब। त्यहाँ पनि संस्थाहरूको राम्रो एकाग्रता छ पाइरेनीजको अवसर र मा रामोन वा काजल हिंड्न। होसेकाका सर्वश्रेष्ठ चिनिएका रेस्टुरेन्टहरूको लागि, तिनीहरूमध्ये केही निम्न हुन्।
यो ठाउँ छ एक मिशेलिन तारा र दुई रिप्सोल सन। यो एक आधुनिक खाना तयार गरेर विशेषता हो तर परम्परामा जरा रहेको छ र यसको विशेषता पनीमा आधारित व्यंजनहरू हो कालो ट्रफल। यो Huesca मा खाने को लागी एक उत्तम ठाउँ हो।
संग पनि पुरस्कृत एक मिशेलिन तारा, मूल र शीर्ष-गुणवत्ताका उत्पादनहरू कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गर्दछ मेनु तयार गर्न जुन दुबै क्लासिक र वर्तमान हो। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई स्वाद लिने मेनू प्रदान गर्दछ।
फ्लोर, ह्युस्कामा खानको लागि बारहरूमा क्लासिक
यो ठाउँ धेरै वर्षदेखि खुला छ यसको राम्रो खानाको लागि धन्यवाद। यसका विशेषताहरू मध्ये एक हो ट्रफल सॉसको साथ गोमांस टेंडरलिन र कन्फिट प्याजको साथ बतख फिई केक.
यो प्राप्त गर्न पहिलो तपस बार थियो एक मिशेलिन तारा, त्यसोभए उसको लागि खास के हो भने तपाईं पट्टीमा खानुहुन्छ। साथै, भान्साकोठा खुल्ला छ त्यसैले तपाईं कार्यस्थलमा शेफ र तिनका सहयोगीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको विशेषताहरू मध्ये तपस पनि हुन् फोई माइकुट, को पोर्क ड्वालपको साथ अक्टोपस र को क्रिस्टल कोका क्यान्टाब्रियन एन्कोभीको साथ.
यो यसको विस्तृत रूपमा खडा छ ग्रील्ड, साँच्चै स्वादिष्ट। तिनीहरूको भाँडा माझ, रातो फल र foie साथ मुख-बिट्स, the Iberian शिकार carpaccio, the ग्रील्ड गाई रिबे र अली-oli संग ग्रिल आर्टिचोकस.
यस स्थानले क्षेत्रको साना उत्पादकहरूबाट यसको कच्चा माल खरीद गर्दछ जुन प्रयोग गर्दछ पारिस्थितिक मिडिया खेती। उनीहरूसँग उनले त्यस्तै भाँडा माझ्छन् टेन्सिनो दुईवटा फोडामा पिएर च्याउमा मसरूम इमल्सनको साथ दुलही, the Foie संग La Hoya छोला र फोन्ज चीज मूसको साथ गाजर केक.
खाना पकाउनमा विशेषज्ञ ग्लुटन बिना, उनको शेफ, Mateo सिएरा, मास्टर शेफ मा एक प्रतियोगी थियो। यसले ग्यास्ट्रो-ट्यापासहरू जस्तै प्रस्ताव गर्दछ Osmotized खीरा cannelloni र समुद्री मदिरा tartare भरिने o मह र भेडाको प्याजको साथ लहसुनको पाठोको काँध.
फिल्म 'पल्प फिक्शन' मा आधारित सजावटको साथ, यसले तपस लाई यत्तिकै स्वादिष्ट प्रदान गर्दछ गाईको मासु, the भेडाहरूको टाउको cannelloni र स्टेक टार्टारे। ह्युस्कामा खानका लागि ठाउँहरूमध्ये यो सबैभन्दा मूल हो।
निष्कर्षमा, यदि तपाई ह्स्का र यसको प्रान्तमा कहाँ खानुहुन्छ भनेर सोचिरहनुभएको थियो भने तपाईसँग पहिले नै केहि सन्दर्भहरू छन्। यद्यपि अर्गोना city शहरमा अरू धेरै ठाउँहरू पनि छन् जस्तै पोष्ट, the Candanchu, ला बाउन्स, the ग्रिल ट्रिन्चे o मेरो घर.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Gastronomy » Huesca मा कहाँ खाने